Oshayasibhamu babulale 6 ePakistan | isiZulu
Ngabe silandela iqembu noma umholi kwi-ANC?
Ngiyalazi iqembu engiyolikhetha kodwa-ke angazi noma kuyobe kungukulandela izimiso noma umholi, kuzindla uSandile Khathi.
Kumiswe ukhetho lokuchibhiyela eKZN Ikhomishana eyongamele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission kudingeke ukuthi ihoxise ukhetho lokuchibiyela obekumele lube senyakatho neKwaZulu-Natal.
Oshayasibhamu babulale 6 ePakistan
Imibiko ehambelanayo Kubulawe 7 wamasosha ePakistan
Ibhomu libulale 20 ePakistan
Ukuhlasela kubulale 20 ePakistan
Quetta - Oshayasibhamu babulale abantu abayisithupha eningizimu ntshonalanga nePakistan, nokubalwa nomsebenzi we-United Nations Food and Agriculture Organization, kusho izikhulu.Labo shayasibhamu bavulele ngenhlamvu kubasebenzi be-UN esifundazweni iBaluchistan, kwashona abantu ababili, kusho owamaphoyisa uRustam Khan.
Kulaba ababili ababulewe, kubalwa umsebenzi wale nhlangano nomshayeli obeqashiwe, kusho isikhulu se-UN esicele ukungadalulwa igama ngoba asivumelekile ukukhuluma nabezindaba.Akekho osaphumele obala ngalokhu kuhlasela.
Kushone 12 kuhlaselwa e-Iraq
Ushayasibhamu ongaziwa uvulele ngenhlamvu kwashona abantu besifazane abayisikhombisa nabesilisa abahlanu endaweni yokuthengisa ngomzimba eBaghdad.
Zitholakele zonke izidumbu emayini Abatakuli ngoLwesithathu bathole isidumbu sokugcina kwabangu-28 abashone ngeledlule ngesikhathi kubhidlika igumbi elingaphansi komhlaba emayini e-Indonesia.
Imeya iphika olwezidakamizwa
IMeya yaseToronto, uRob Ford, uqhubekile nokubalekela imibuzo nge-video, emveza ebhema isidakamizwa se-cocaine, phezu kokuphoqwa yizimbangi ukuthi aphendule.
Isenkingeni ‘iMeya yaseZumaville’
Kuthwetshulwe uthisha etitinya umfundi
Kutalajwe ugogo osolwa ngokuthumba ibhungu
Umphakathi utalabhe abasolwa ngokudlwengula
Ubulawe ukuncintsheka umoya uVuyo
GIS - 22:44:42 PM
ROAD CLOSED due to a fire at the Holy Family school